Tanzania " Journey-Assist - Fampahalalana mahasoa. Tora-pasika. Vola. Ny toetr'andro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Africa » Tanzania
Tanzania. Fampahalalana ankapobeny
Tanzania ho an'ny fizahan-tany. Inona no tokony hatao any Tanzania
Tanzania no firenena lehibe indrindra amin'ny faritra Afrika Atsinanana.
Ho an'ny mpizahatany, Tanzania dia lasa iray amin'ireo firenena afrikanina mahaliana sy mahasalama, satria manana fotodrafitrasa efa novokarina tsara ary somary azo antoka ihany. Ankoatr'izany, ny biby an-toerana dia tena samihafa, ary misy torapasika maro amoron-tsiraka.
Fialan-tsasatra any Tanzania
Any Tanzania, misy fomba isan-karazany amin'ny fandaniana fialam-boly azo alaina: torapasika, safarisoa, mandinika ireo fijery. Any amin'ny kontinanta amin'ny firenena dia misy zavatra mahaliana amin'ny zavaboary afrikana be mpahalala. Izy ireo no volkano, farihy ary ny kofehy.
Tanzania dia manana valan-javaboarim-pirenena maro, tsirairay avy ireo dia azo antsoina hoe miavaka tanteraka. Ao amin'ireo nosin'ny Zanzibar nosy dia manana fahafahana miala voly amin'ny tora-pasika, mandeha mandeha amin'ny fitsidihana ary handray anjara amin'ny fitsangatsanganana.
Ny morontsiraka eo an-toerana dia rakotra fasika fotsy madio, ary ny fahatafintohon'ny tontolon'ny rano miaraka amin'ny fahasamihafana. Noho izany, tao anatin'ny taona faramparany dia nitombo ny fizahan'ireo mpizahatany nankany Tanzania.
Ny torapasik'i Zanzibar. Tanzania
Tanzania dia mipetraka ao amin'ny ambaratonga atsimo vitsy monja ambanin'ny ekoatera. Ny afovoan-tany (lehibe) ao amin'ny firenena dia mitoetra eo amin'ny lemaka lehibe iray, izay mahatratra 1 800 m.
Loza ao Tanzania
Amin'ny serasera, matetika ny Tanzaniana dia mampiseho fahasoavana sy fanampiana. Tena tsara ho an'ireo mpizahatany avy any amin'ireo firenena miteny Rosiana. Na eo aza izany dia ketraka mafy izy rehefa mandeha manodidina ny tanàna hifindra lavitra amin'ny arabe midadasika, raha tsy izany dia somary avo be ny risika amin'ny halatra. Aza mitondra vola be dia be sy firavaka volamena. Zava-dehibe indrindra amin'ny alina ny tsy mankany amin'ny toerana tsy mahazatra sy tsy misy ilana azy. Rehefa mandeha ianao dia tokony manana kopia pasipaoronao miaraka aminao (raha sendra mifihaona amin'ny polisy ianao), ary fatra-kevitra ny hihazona ilay pasipaoro tany am-boalohany ao anaty trano fandraisam-bahiny.
Nanao vakansy alohan'ny fitsidihana tany Tanzania
Ilaina ny vaksiny ny tazo mavo alohan'ny fitsidihana an'i Tanzania. Ny fanafody antimalaria dia tokony hatao mandritra ny herinandro alohan'ny andro hialana.
Ny kalitaon'ny rano ao Tanzania
Ny rano amin'ny paompy dia tsy azo levona eto. Mila mividy ao anaty tavoahangy ny rano, raha mijery ny hahitana raha voafehy tsara. Ny rano ampiasaina amin'ny fomba fidiovana dia tsy maintsy andrahoina na disimy amin'ny fomba hafa.
Ny ronono sy ny sakafo hafa
Ny ronono sy ny vokatra rehetra avy ao aminy dia tokony hasiana fanjifana. Ny hena sy ny trondro dia mety hohanina aorianny mangotraka na masaka tsotra fotsiny.
Vola, fifanakalozana vola, ATM
Ny volam-pirenena Tanzania dia ny shilling Tanzaniana. Fanendrena iraisam-pirenena - TZS.
Ho fanampin'izany, na aiza na aiza, dolara amerikana no ankasitrahana. Euros, Swiss francs ary Anglisy dia tsy ekena ho aloa, fa ny fifanakalozana any Tanzanianina kosa no atakalony amin'ny fifanakalozana rehetra any amin'ny firenena. Ny volavolan-dalàna taloha dolara izay navoaka talohan'ny 2004 dia tsy azo atakalo na ampiasaina amin'ny fandoavana.
Ny shilling Tanzaniana dia zaraina ho 100 cents. Ao anaty mivezivezy izao dia misy volavolan-dalàna miaraka amin'ny sandan'ny 500, 1, 000, 2 ary 000 délilles, ary koa ny vola madinika izay sandan'ny tarehy 5 cents, 000, 10, 000, 50, 1, 5 ary 10 shillings.
Ao amin'ny fivarotana maro, hotely sy trano fisakafoanana, ny vidin'ny vidiana dia dolara fa tsy kitapom-bolany. Na izany aza, afaka mandoa shillings izay misy marika vidin'ny dolara fotsiny. Any amin'ny toeram-pivarotana izay napetraka ny fisoratana vola dia azo atao ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny shillings na banky banky.
Rehefa fifanakalozana ny vola vahiny ho an'ny shiliana Tanzaniana, miova ny taham-panakalozana miankina amin'ny anaram-boninahitra amin'ny banky. Ny kitapom-bola miaraka amin'ny anaram-boninahitra 50 sy 100 dolara dia atakalo amin'ny vidim-bavak'i Tanzania amin'ny vidiny tsara kokoa noho ny fraisana dolara amin'ny antokom-piainana ambany kokoa. Ny fifanakalozana dia azo atao any amin'ny banky, hotely, mpivarotra miavaka. Amin'ny farany, ny tahan'ny fifanakalozana dia matetika avo kokoa.
ATM ao Tanzania
Betsaka ny vola any Tanzania, saingy tena atolotry ny hitondranao foana ny vola kely any amerikanina amerikana sy / na ny fitrandrahana Tanzania. Eny tokoa, indraindray tsy misy banky ao amin'ny ATM. Ary koa, ny banky sasany dia mihevitra an'i Tanzania ho firenena tsy azo antoka sy fanakanana karatra rehefa avy any an-tranon'i izy ireo. Ao amin'ny ATM eo an-toerana dia misy vaomiera lehibe rehefa manala vola (6 $ eo). Ny fatra farany azo esorina mandritra ny asa iray dia matetika voafetra ho 400 shillings (manodidina ny $ 000).
Ny dolara sy ny vola hafa ao Tanzania
Serasera finday any Tanazania
Androany ao Tanzania dia misy mpaninjara finday 4. Ireo dia Airtel, Tigo, Zantel ary Vodacom. Saingy ambany ny kalitaon'izy ireo ary ny fitaterana azo itokisana dia tsy hita afa-tsy amin'ny tanànan'ny firenena lehibe indrindra. Ny fandrakofana ao Zantel dia mihatra amin'ny Zanzibar ihany. Noho izany, aza miantehitra loatra amin'ny fandalovanao. Kely ihany koa ny kalitaon'ny Internet finday eto, fa any an-tanàn-dehibe kosa dia misy ny kafe amin'ny Internet misy fidirana amin'ny Internet na somary tsy dia mahazatra amin'ny vidiny 1 $ eo isan'ora.
Fitaterana any Tanzania
Tonga any Tanzania amin'ny ankapobeny ny mpizahatany. Ity seranana ity dia manana seranam-piaramanidina 3 manompo sidina iraisampirenena - any Arusha, Dar es Salaam ary Zanzibar. Ao Tanzania tenany, misy tambajotram-pitaterana seranam-piaramanidina eo anelanelan'ny tanàna lehibe indrindra. Misy ny seranam-piaramanidina kely ho an'ny sidina anatiny. Somary avo ny vidin'ny tapakila.
Bus any Tanzania
Bisy any Tanzania. "Dala-Dala"
Ny fifandraisana lalindalina eo an-tanànan'ny Tanzania dia omen'ny karazana fitateram-bisy ao an-toerana - "Dala-Dala". Ireo dia fiara fitateram-bahoaka kely miaraka amin'ny saran-dalana mora vidy. Manana ambaratonga ambany izy ireo ary mirona hipoka.
Fifandraisana amin'ny lamasinina ao Tanzania
Fiaran-dalamby any Tanzania
Misy ihany koa ny tamba-jotra misy làlamby any amin'ity firenena ity, izay tsara novolavolain'ny fitsipiky ny firenena Afrikanina. Mampifandray ireo tanàn-dehibe Tanzania lehibe kokoa na latsaka lavitra izany. Mandritra izany fotoana izany, ny lamasinina matetika tara tara, indraindray na dia 12 ora aza. Misy fiara 4 kilasy: rendrarappe, sedentaly 2, matory faha-2 ary sedentaly faha-3. Ny saran-dalana dia araky ny kilasy ary manodidina ny 1-5 dolara isaky ny 100 km. Ny fiara manankarena dia mahazo aina, fa ny ambiny dia tena mandreraka amin'ny dia lavitra ary tsy mahazo aina.
Ferry mankany Zanzibar. Tanzania
Avy amin'ny Dar es Salaam mankany amin'ny nosy Pemba sy Zanzibar ny sambo. Ny serivisy hafa dia miasa amin'ny farihy Nyasa, Tanganyika ary Victoria.
Ny fiara fitateram-bahoaka introity any Tanzania dia misy fiara fitateram-bahoaka (efa zatra taloha), fanakatonana valan-jaza sy rickshaws.
Ny fanofana fiara ao Tanzania
Misy toerana manofa fiara eto amin'ity firenena ity, saingy ny fiara mandeha any Tanzania irery no tsy mendrika. Ambany ny kalitaon'ny lalana eto, ny lozam-pifamoivoizana matetika.
Fiantsenana ao Tanzania
Any Tanzania, afaka mividy zavatra betsaka ianao amin'ny tsiro afrikanina. Ao amin'ny fivarotana ao an-toerana dia misy fitafiana maro vita amin'ny akora voajanahary, izay natao hanala sasatra amin'ny morontsiraka sy ho safidiany. Samihafa isan-karazany ny pareos, T-shirt, scarf, pataloha maivana, shorts, breeches.
Any amin'ireo tanàna telo lehibe indrindra ao Tanzania dia misy ivon-toeram-pivarotana feno - Dodoma, Dar-el-Salaam, Zanzibar. Na izany aza, karazana fahatsiarovana marobe no atolotra manerana ny firenena. Ny vokatra rehetra eto an-toerana dia tototry ny toe-tsaina afrikanina. Sarivongana sy sarontava isan-karazany vita amin'ny hazo, entana vita amin'ny hoditra, amponga ary firavaka, ao anatin'izany ny tanzanite, vato sarobidy izay trandrahana akaikin'ny tongotry Kilimanjaro, no mahaliana.
Ny kafe lehibe indrindra
Tanzania dia iray amin'ireo mpanondrana kafe lehibe indrindra manerantany. Ny karazana kalitao amin'ity fisotroana ity dia novokarina eto, toa an'i Kent, Typika ary Blue Mountain. Mamokatra sy mivarotra dite tsara koa izy io, indrindra ny karazana Orthodoksa.
Souvenir any Tanzania
Ny karazana fahatsiarovana tany am-boalohany dia zavatra vita amin'ny kofehy aloe. Ireo zavatra ireo dia sariaka amin'ny tontolo iainana ary namboarina tsara. Miavaka ihany koa ny zava-manitra tanzaniana. Indrindra ny ankamaroan'izy ireo dia maniry ao amin'ny nosy Zanzibar, izay misy fambolena sakamalao, jirofo ary kanelina. Amidy amin'ny tsena maro any amin'ny ankamaroan'ny tanàna rehetra ao amin'ny firenena izy ireo.
Ny toeram-pivarotana lehibe indrindra ao Tanzania
Ny ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Dar es Salaam dia ny Mwenge Handicrafts Village sy nyerer Cultural Center. Manolotra fitafiana, firavaka, sarivongana mpanao asa-tanana any an-toerana, sobika sns sns izy ireo.
Nefa tokony ho ao an-tsaina fa ny souvenir amin'ny bazaar matetika dia mora kokoa noho ny amin'ny magazay. Ny bazaar ao an-tanànan'i Arusha, any avaratr'i Tanzania, dia manolotra asa-tanana isan-karazany nataon'ny vahoaka Maasai. Ireo dia sarivongana ebony, lamba firakotra, lamba, sary hosodoko. Ny ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Zanzibar dia ny One Way sy ny Memories an'ny fivarotana Zanzibar. Izy ireo dia mivarotra fahatsiarovana isan-karazany, ary koa zava-manitra isan-karazany.
Mety hahaliana ny mamaky ny lahatsoratry ny iray amin'ireo mpikambana mavitrika ao amin'ny vavahadintsika: Toerana 10 tsara indrindra hitsidihana any Tanzania
Mahaliana ihany koa ity lahatsoratra ity: Nosy 10 ambony any Tanzania